Usaziwayo uthi akuqali ngaye ukuthola isoka elincane kunaye - Umbiko | News24
Usaziwayo uthi akuqali ngaye ukuthola isoka elincane kunaye - Umbiko
Johannesburg – Umlingisi oyintandokazi uTina Jaxa kuthiwa uthandana nowesilisa amshiya ngeminyaka engu-10 ubudala, kubika iSundayWorld.
UJaxa ukuqinekisile ukuthi abalingani ngeminyaka nesoka lakhe kodwa akafunanga ukuveza eminye imininingwane yothando lwabo.
“Ziyenzeka izinto ezinjena, angiyena owokuqala ukuthandana nomuntu osemncane futhi angiyena owokugcina,” kusho yena.
OLUNYE UDABA:Kuhlelwe inkonzo yesikhumbuzo kaProsper
Umngani walo mlingisi uthi waqala ukubona isithombe salo mlisa ngesikhathi lo mlingisi efake isithombe sabo bobabili enkundleni u-Whatsapp. Kuthiwa banezinyanga eziyisishiyagalolunye bethandana futhi bobabili bajabulile.
Bahlangana ngo-Disemba 2014 bathandana, kodwa bahlukana ngemuva kokuthola ukuthi lo mlisa mncane kunaye. Babuyelana phakathi konyaka odlule nokuyilapho banquma khona ukungaphumeli obala ngothando lwabo.
Ekuqaleni lo mlingisi ubesaba ukuphumela obala ukuthi uthandana nalo mlisa ngenxa yeminyaka yakhe.